Miarahaba ny tranonkala ofisialy vaovao any ivelany an'ny Dongguan Hobrin Badge and Gift Co., Ltd.
Dongguan Hobrin Badge and Gift Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny Mey 2012. Izy io dia orinasa feno manambatra ny famokarana sy ny varotra. , Ny vokatray lehibe indrindra dia ny: medaly, badge, tags pet, bookmark, openers tavoahangy, tagna valizy, mpihazona labozia, firavaka Noely, fahatsiarovana eny amin'ny oniversite, morontsiraka ...
Ny medaly marathon dia loka iray ho an'ny hazakazaka lavorary
Medaly marathon, ho loka ho an'ny hazakazaka lavorary, no andrasan'ny mpandeha an-tongotra rehetra! Ho an'ny mandeha dia fifaliana mahavariana ny famaranana rehetra, ary ny medaly rehetra dia marika fanentanana, hatsembohana ary fahasambarana. Noho izany, medaly sarobidy sy mamorona amin'ny ankapobeny no lasa tsara indrindra ao am-pon'ny mpihazakazaka ...
Ny medaly no porofon'ny mpandresy
Medaly dia mari-pankasitrahana ho an'ireo mpandresy amin'ny fifaninanana isan-karazany. Matetika izy ireo dia vita amin'ny vy. Amin'ny fifaninanana ara-panatanjahantena, matetika misy medaly volamena, volafotsy ary varahina mifanaraka amin'ny tompon-daka, toerana faharoa, toerana fahatelo. Araka ny endriny samihafa, medaly marathon manufactu ...
Ny fanomezam-boninahitra ny medaly dia ny fikatsahana fahalavorariana aorian'ny idealy
Ny medaly dia endrika valisoa sy fanehoana ny fahombiazan'ny tsirairay. Ny medaly dia misy loka, izay fikatsahana fahalavorariana aorian'ny idealy. Ny fanaingoana medaly dia misy lanjany azo ampiharina maharitra ary tsy mitovy ny fampiasana lanja ho an'ny rehetra. Ny vidin'ny medaly dia misy ifandraisany amin'ny mater ...